ထိုင်နေတာတောင် ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှတွေ အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် သဇင်ဦး - Myanmarload
ထိုင်နေတာတောင် ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှတွေ အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် သဇင်ဦး
လွန်ခဲ့သော ၁ လ က 15:08 May 29, 2020
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေသဇင်ဦးကတော အလန်းစားပုံတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်လိုက်ပြန်ပါပြီ။သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကလည်း ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အလှဟာ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီး ယောင်္ကျားလေး ပရိသတ်အများဆုံး အားပေးမှုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှပုံရိပ်တွေကို အများဆုံး ရိုက်ကူးလေ့ရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကျော်ကြားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
သဇင်ဦးက လတ်တလောမှာတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေပြီး သူမ အားလပ်တဲ့ အချိန်လေးတွေမှာလည်း ပရိသတ်တွေဆီကို အပျင်းပြေဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို တင်ပေးလေ့ရှိနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း တခဲနက် အားပေးနေကြတာပါနော်. ။ ယခုမှာလည်း သဇင်ဦးက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှတွေ ပေါ်လွင်အောင် ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ ပုံရိပ်တချို့ကို တင်ပေးလါတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.....။
ပုံလေးတွေတိုင်းက ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ အလှတွေပိုနေတဲ့အပြင် " မမနဲ့တွေ့ရတာမောင်လေးမင်းဟာကံကောင်းသူ " ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုပါ ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်. ။ သဇင်ဦးရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေက အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖိူ့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့အုန်းနော်.။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းမယ့် အနုပညာလှုပ်ရှားတွေကိုလည်း အားပေးလိုက်ကြပါအုန်းနော်...... ။
Source & Photo credit - Ei Sabal Phyu's facebook account